Iseluleko kulabo abafuna ukufunda isiJalimane, ukuthi bangafunda kanjani isiJalimane, bangaqala kuphi ukufunda isiJalimane, ukuthi bangafunda kanjani isiJalimane? IsiJalimane isifundo okungekho nzima ukusifunda uma ufunda izihloko zohlelo lolimi ezidingekayo futhi wenza okuningi ngekhanda lamagama.
Okubalulekile ukuthi ugxile impela esifundweni bese usebenza ngokuzimisela. Kuleli qophelo, uma ugxila ezindabeni ezimbalwa okufanele uzinake, kuzoba lula kakhulu ukuhlanganisa okufundiwe. Sizozama ukukusiza ngendatshana yethu enesihloko esithi Iseluleko Kulabo Abafuna Ukufunda IsiJalimane.
Naka imithetho yohlelo lolimi
Lapho uqala ukufunda isiJalimane, into yokuqala okufanele uyinake yimithetho yohlelo lolimi. Uhlelo lolimi lwesiJalimane lungaba nzima kwesinye isikhathi, kepha uma uqeda umsebenzi wohlelo kusukela ekuqaleni, kuzoba lula kakhulu kuwe ukwazi kahle isiJalimane Ngalokhu, sincoma ukuthi wenze izivivinyo zohlelo lolimi ezilungele kangcono izinga lakho.
Funda Izincwadi ngesiJalimane
Ukufunda incwadi ngesiJalimane kungahle kubonakale kunzima ekuqaleni, futhi lapho ungakwazi ukuyiqonda, ungayishiya inesithukuthezi. Kepha ngeke ube nesithukuthezi uma ucabanga ukuthi ukufunda izincwadi kuyindlela enhle yokufunda amagama amasha. Funda wonke amagama ongawazi umqondo wawo futhi uzijwayeze ukubona ukuthi avela kanjani kwisisho esijwayelekile encwadini.
Bukela ama-movie ngesiJalimane
Ukubuka ama-movie kubaluleke kakhulu ekuqondeni okuzwa ekufundeni kolimi lwangaphandle. Kwabaqalayo, kungaba ngcono ukuqala ngamakhathuni. Ungaqhubekela kuma-movie emazingeni alandelayo. Kuyasiza futhi ukulandela izingosi zezindaba zeziteshi zaseJalimane kwi-inthanethi.
Yenza Abangane BaseJalimane
Esikhathini esedlule, ubungani bepeni babunconywa kulabo abaqala ukufunda olunye ulimi. Kulezi zinsuku, ubuchwepheshe buqhubekele phambili kakhulu kangangokuba unethuba lokwenza abangane emhlabeni wonke nge-inthanethi. Kulula kakhulu ukuguqula leli thuba libe yithuba. Uma wenza abangane baseJalimane futhi uxoxa noma ubhalelana nabo, ukuzethemba kwakho nakho kuzothuthuka.
Nakekela Ukubhala NgesiJalimane
Ukukhuluma ngesiJalimane kubalulekile njengokuqonda nokubhala. Ukubhala kusho lukhulu, njengoba kungumsebenzi wokuguqula ulwazi lwakho lube uhlobo olubonakalayo. Singancoma ukuthi uqale ibhizinisi lakho lokubhala ngokugcina idayari.